Lucky7ရှမ်းကိုးမှီး၏ စည်းကမ်းများ။-Lucky7Casino-Lucky7Shan Koe Mee-Lucky7ရှမ်းကိုးမီး - Lucky7 Casino Shan Koe Mee ရှမ်းကိုးမီး
Lucky7ရှမ်းကိုးသီး၏စည်းကမ်းများ။ Lucky7ရှမ်းကိုးသီးဂိမ်း ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲ? ကာစီနို ငွေပွားလွယ်သော ရွှေရှမ်းကိုးမှီး ဖဲဂိမ်း ယုံကြည်စိတ်ချ အွန်လိုင်းဂိမ်း ရှမ်းကိုးမှီး ရွှေဂိမ်း ရှမ်းကိုးမှီး ရွှေရှမ်းကိုးမှီး ရှမ်းကိုးမှီး ရှမ်းကိုးမှီး အွန်လိုင်းဂိမ်း ရှမ်းကိုးမှီးကစားနည်းများ ရှမ်းကိုးမှီးနှင့်ငါးပစ်ဂိမ်းများ ရှမ်းကိုးမှီးအကြောင်းသိကောင်းစရာများ အွန်လိုင်းကာစီနို
Lucky7ရှမ်းကိုးမှီး၏ စည်းကမ်းများ။-Lucky7Casino-Lucky7Shan Koe Mee-Lucky7ရှမ်းကိုးမီး
2022 年4月 26 日	 2022 年6月 25 日
ucky7ရှမ်းကိုးမှီးကို ဘယ်လိုနည်းဖြင့် စနစ်တကျ ကစားသင့်ပါသလဲ?
မြန်မာလူငယ်တွေ လူကြီးတွေ နားလည်ကျသည့် ဖဲဂိမ်းအကြောင်းပြောပြရလျှင် ရှမ်းကိုးမီကို တင်ပြရပါလိမ့်မည်။ လောင်းကစားအတွက် ဖြစ်စေ အပျော်ကစားသည် ဖြစ်စေ နားလည်ရလွယ်ကူပြီး ကစားရလွယ်ကူသောကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလုံးသာမက အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများမှပါ စိတ်ဝင်စားစွာ ကစားလာသော ဂိမ်းအမျိုးအစား အဖြစ်ကျော်ကြားလာခဲ့သည်။ သိုသော် ရှမ်းကိုးမီးကစားရန် သတ်မှတ်ထားသော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို အတည်တကျ ချမှတ်ထားခြင်း မရှိသောကြောင့် စည်းမျည်းများသည် တဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာပြီး ဂိမ်းကို မျိုးဆက်သစ် တခုမှတခုသို စည်းမျည်းအသစ်များဖြင့် ပြောင်းလဲလာခဲ့ပါသည်။ ထိုကြောင့် ရှမ်းကိုးမှီးကို စနစ်တကျကစားတတ်စေရန် ကစားနည်းအားအောက်တွင် ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။
Lucky7ရှမ်းကိုးမှီးကစားရန် အတွက် ဘာတွေလိုအပ်ပါသလဲ?
ရှမ်းကိုးမှီးကစားရန်အတွက် ဖဲချပ် 52ချပ်လိုအပ်ပါသည် အမှန်တကယ်ဂိမ်းတွင် ဒိုင်နှင့် ထိုးသား 3ယောက်မှ 6ယောက်ထိ ကစားနိုင်ပါသည်၊ သိုသော်လည်း တချို ကစားပွဲစဉ်များတွင် လောင်းကြေးကိုအလယ်တွင် ထားရှိပြီး အကြီးဆုံးအမှတ်ရရှိသော ကစားသမားသည် လောင်းကြေးတစ်ခုလုံးကို အနိုင်ရမည်ဖြစ်သည်။ အကြီးဆုံးအမှတ်ပေါင်းခြင်းသည် “9” ဖြစ်သည်။ ဤကဲ့သို ကစားခြင်းသည် သင်နှင့်အရောင်းကိုယ်စားလှယ် ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းမဟုက်ပဲ ကစားသမားအချင်းချင်း ကစားခြင်းသာ ဖြစ်သည်။
ဂိမ်းအစတွင် အရောင်းကိုယ်စားလှယ်သည် ကစားသည့်ရှယ်ယာပမာဏကို “ဘဏ်” ထဲသို ထည့်သွင်းသည်။ အရောင်းကိုယ်စားလှယ်သည် ဘဏ်သိုအစုရှယ်ယာများကို ထုတ်ယူပြီး မည်သည့်ရှယ်ယာကိုမျှ ထည့်၍မရပါ။ စုဆောင်းထားသော အမြတ်ငွေအားလုံးကို ဘဏ်မှ အလိုအလျောက်ပြုလုပ်ပေးပါလိမ့်မည်။ သိုသော်အချိုကိစ္စများတွင် ဘဏ်ကငွေအားလုံးဆုံးရှုးပါက ဘဏ်တွင်ငွေပမာဏ နှစ်ဆပေါင်းထည့်ခြင်းဖြင့် အရောင်းကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ဆက်လက်ရပ်တည်နိုင်ပါသည်။ မိမိဘဏ်တွင် အပ်နှံသည့်ပမာဏသည် ဘဏ်ငွေပမာဏ၏ အနည်းဆုံး 10%ကို အပ်နှံရမည် ဖြစ်ပြီး ၎င်းတိုသည်အနည်းဆုံး 100 ကိုအပ်နှံရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဘဏ်တွင် ငွေမရှိတော့ပါက အရောင်းကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ရုတ်သိမ်းခံရမည်။ အခြားသူတစ်ဦးဖြင့် အစားထိုးပြီး ဘဏ်တွင်ငွေသုံးဆတိုးပါက အရောင်းကိုယ်စားလှယ်သည် “သတိပေးချက်”3ကြိမ်ခေါ်ဆိုပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ထိုကြောင့် သတိပေးချက်ကို ခေါ်ဆိုပါက အရောင်းကိုယ်စားလှယ်သည် ပွဲစဉ်3လှည့်ပြီးနောက် ပြောင်းလဲသွားမည်ဖြစ်သည်။ ကိုယ်စားလှယ် ပြောင်းလဲပြီးနောက် ကျန်ရှိသောမည်သည့်ပမာဏမဆို အရောင်းကိုယ်စားလှယ်က ရရှိပါမည်။
Lucky7ရှမ်းကိုးမှီး၏ စည်းကမ်းများ။
ကစားသမားတစ်ဦးချင်းစီကို ဖဲကတ်2ကတ်ခွဲထုတ်ပေးပြီး ၎င်းတိုထပ်မံဆွဲလိုပါက ကတ်တစ်ကတ်သာ ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။ ကတ်တစ်ခုအား တွက်ချက်ရန်နည်းလမ်းမှာ ကတ်တန်ဖိုးများကို ပေါင်းထည့်ကာ နောက်ပြန်အမှတ်များ/နောက်ဂဏန်းများကို သာကြည့်ရသည်။ နံပါတ်မပါသောကတ်များ၏ တန်ဖိုးမှာ A=1, K=10, Q=10, J=10 ဖြစ်ပါသည်။ ( Joker သည် ရှမ်းကိုးမှီးတွင် မပါဝင်ပါ )။ ဥပမာ- စုစုပေါင်း 17 မှတ် သည် “7”ဖြစ်သည်။ စုစုပေါင်း 24 မှတ်သည် “4” ဖြစ်ပါသည်။ ထိုနည်းအတိုင်း တွက်ချက်ပါမည်။ ကစားသမား၏အမှတ်များတူညီပါက ကတ်အရေအတွက်ကို ကြည့်ရှုရန်လိုအပ်ပါသည်။ ဥပမာ- 7မှတ်ချင်းတူညီနေလျှင် 2ကတ် 7မှတ်ရသူသည် 3ကတ် 7မှတ်ရသူကို အနိုင်ရသည်။ ကတ်အရေအတွက် တူညီပါက တန်ဖိုးကိုကြည့်၍ ဆုံးဖြတ်ရန်လိုအပ်မည် ဖြစ်သည်။ A သည် အကြီးဆုံးဖြစ်ပြီး A>K>Q>J>10>9>……..>2 အစဉ်လိုက်ဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာ- 4+3=7 ရှိသောကစားသမားကို 6+A=7 ရှိသောကစားသမားက နိုင်ပါသည်။ ထိုအပြင် အမှတ်များ ကတ်များတူညီနေပါက ၎င်းတို၏ အပွင့်ကိုကြည့်၍ ဆုံးဖြတ်ရပါမည်။ ဖဲအပွင့်များတွင် အပွင့်4မျိုးရှိပါသည်။ Spade, Heart, Diamond နှင့် Club ဆိုပြီး ကြီးစဉ်ငယ်လိုက်ရှိပါသည်။ Spade သည် အကြီးဆုံးဖြစ်ပြီး Club သည် အငယ်ဆုံးဖြစ်ပါသည်။ ရှမ်းကိုးမှီးတွင် အဓိကအချက်မှာ အပွင့်တူညီခြင်းသည် အကြိမ်ရေပိုရနိုင်ပါသည်။ ကတ်2ကတ်တွင် Spade, Spade တူညီပါက လောင်းကြေး 2ဆရရှိမည် ဖြစ်ပြီး 3ကတ်တွင် အပွင့်အကုန်တူပါက 3ဆရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကိုယ်စားလှယ်မှ ကတ်အားလုံးအားခွဲဝေပြီးလျှင် မိမိကြိုက်နှစ်သက်သော ကစားသမားအား စတင်၍ ဖမ်းနိုင်ပြီး မိမိကတ်နှင့် အနိုင်အရှုးအား နှိင်းယှဉ်ရပါမည်။ ဤဂိမ်းတွင် သင်သည် 8 သိုမဟုက်9ကို 2ကတ်ဖြင့် ရပါက သင်သည် ၎င်းကို “ဒို” ဟုဆိုကာ ကိုယ်စားလှယ်အားပြသရမည်ဖြစ်ပါသည်။ သိုသော်9ဒို သည် 8ဒိုကို အနိုင်ရသကဲ့သို ဒိုချင်းတူညီနေပါက အထက်တွင်ဖော်ပြသကဲ့သို အပွင့်ချင်းယှဉ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ Spade A နှင့် Spade 8 သည် ရှမ်းကိုးမီးတွင် အကြီးဆုံးဖြစ်ပြီး “ဘုရင်” ဟုပင် တင်စားကြပါသည်။
#ကာစီနို #ငွေပွားလွယ်သော ရွှေရှမ်းကိုးမှီး #ဖဲဂိမ်း #ယုံကြည်စိတ်ချ အွန်လိုင်းဂိမ်း ရှမ်းကိုးမှီး #ရွှေဂိမ်း ရှမ်းကိုးမှီး #ရွှေရှမ်းကိုးမှီး #ရှမ်းကိုးမှီး #ရှမ်းကိုးမှီး အွန်လိုင်းဂိမ်း #ရှမ်းကိုးမှီးကစားနည်းများ #ရှမ်းကိုးမှီးနှင့်ငါးပစ်ဂိမ်းများ #ရှမ်းကိုးမှီးအကြောင်းသိကောင်းစရာများ #အွန်လိုင်းကာစီနို
PreviousLucky7ကစားနည်းလည်ပတ်ပုံ-Lucky7 Casino-Lucky7Shan Koe Mee-Lucky7 ရှမ်းကိုးမီး
NextGK 888 football online betting- GK 888 အွန်လိုင်း ဘောလုံး